mairie-antananarivo – Famoahana ny andiany «AFO» ao amin’ny sampana mpamonjy voina
auteur 30 jona 2017 Commentaires fermés
Namoaka Mpamonjy voina nahavita fihofanana miisa 42 ny Kaominina Antananarivo Renivohitra ny Alakamisy 29 Jona 2017 tetsy amin’ny Sampana Mpamonjy voina Tsaralalana ka ny 30 tamin’izy ireo no nahazony marimpahaizana BSPPE (Brevet des Sapeurs Professionnels Elémentaires), ny 12 kosa dia notolorana ny Certificat Technique Elementaire izay mitondra ny anarana Andiany AFO.
Tsy olona no fidifidiana izy ireo fa nandalo fitsapampahaizana sady niofana nandritra ny efabolana. Marihana fa andiany tamin’ny taona 2016 ireto navoaka ireto izay mitondra ny galonan’ny Kaporaly. Notolorana marimpakasitrahana manokana tamin’ny anaran’ny Ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana ireo mpiofana mendrika indrindra.
Nisy koa ny fitokanana ireo vavahady mandeha amin’ny herinaratra miisa 8 etsy amin’ny Mpamonjy voina Tsaralalana izay atao indrindra hivoahan’ireo kamiao rehefa misy lozamitranga.
Araka ny nambaran’ny Chef de corps Rabemanantsoa Michel lehiben’ny mpamonjy voina dia efa ho 15 taona ireo vavahady ireo no tsy nandeha. Marihana koa fa ny GIZ sy ny Alemana no niantoka ny fanamborana sy ny famerenana ny vavahady.
Ankoatra izay dia nisy ny fitokanana ireo trano fidiovana sy fivoahana ka ireo mpiofana vao nivoaka ny taona 2016 sy ny andiany 2013 no nanao ny fanavaozana ka tamin’ny alalan’ny tsipaipaika no nanaovana ny asa. Ho lova ho an’ireo zandry sy ho fanalana fahasahiranan’ny manodidina no tanjona nanaovana izany.
Tonga nanome voninahitra ny lanonana ny Lefitra voalohan’ny Kaominina Antananarivo Renivohitra Ramboasalama Emilien izay nisolontena rahateo ny Ben’ny Tanàna Lalao Ravalomanana, teo koa ny Sekeretera Jeneralin’ny Kaominina ary ny Filohan’ny Filan-kevitra Monisipaly. Tonga nanotrona ihany koa ny Mpiandraikidraharaha ao amin’ny Masoivohon’I Alema sy ny GIZ.